En vente actuellement 28/11/2018
Ranom-boankazo asiana betiravy : Afaka isorahana gripa, aretim-po, …
Ny voakanzo mandrafitra ity zava-pisotro iray ity dia samy manan-karena otrikaina avokoa. Ny fitambaran’ny voka-tsoa entin’ireo akora rehetra ireo dia tena mahasalama ny vatana ary misoroka ny karazana aretina. Ankoatra izay dia mampatanjaka ihany koa ity zava-pisotro ity.
1. Notanterahina omaly ny fitsarana ny raharaha mahakasika ilay didim-pananana navelan’i Johnny Hallyday.
Tsiahivina fa tsy namela n’inona n’inona ho an’ireo zanany mihitsy izy, ao anatin’izany ka nangataka ny handova azy kosa ireo zanany.
Krepy amin’ny trondro sy fraomazy
Akora ilaina · « Fromage de chèvre » 60g · Trondro 50g · Lafarinina 90g · Atody 1 · Ronono 250ml · Dibera 20g · « Crème fraiche » 60g · Aneth kely
Torohevitry ny matihanina, ikoloana volo makina!
Isan’ny volo sarotra karakaraina indrindra ny karazam-bolo makiana, noho ilay toetrany tsy mety mangirana, tapatapaka sy tsy mety maniry. Araka izany dia misy fomba fikarakarana manokana mihitsy, tokony atao amin’izy ireny. Manoro hevitra momba izany ny matihanina.
Shopping « été »
1. Robe off shoulder – Boutique Love Story Tana Water Front Ambodivona 2. Robe Louis Vuitton – 40.000Ar – Galerie Mialy Behoririka 2e et Box2 Cont : 034 38 208 88
Ramatoa 60 taona, nandany 100.000 Euros tamin’ny olon-tiany
Tsy nahazaka ny fiainany tany Sri Lanka ka niverina nody tany Angletera i Diane De Zoysa, ramatoa lehibe 60 taona.
Tsy azo antoka loatra ireo orinasa mpanamarina ny fenitra eoropeanina
Mpanao gazety iray avy any Pays Bas, Frantsa no nanao fanadihadiana momba ny fanekena ireny vokatra medikaly ka niteraka resa-be eo amin’ny tontolo medikaly eoropenina.
Novonoin’ilay polisy teny amin’ny tribonaly ny vadiny sy ny zaodahiny
Polisy iray nanao fanamiana sivily no namono ny vadiny sy ny zaodahiny tao amin’ny lapan’ny fitsarana tany Afrika atsimo.
Misy lehilahy izay any milaza ho tia ahy, izaho koa tia azy, nefa menatra be aho.
Ahoana no atoko mba ahafahanay miresaka tsara satria tena te hiresaka be aminy mihitsy aho ?
Kaofitira « rhubarbe » sy frezy
Karazana zava-maniry tsy misy eto amintsika, saingy azo volena eto kosa ny « rhubarbe ». Vokatra iray ahitana azy, izay tena mafilotra tokoa, ity omena anao ity. Kaofitira azo avy aminy sy nampiarahina tamin’ny frezy.
Tombotsoa 4 azon’ny ankizy, raha miompy saka
Tsara ho an’ny ankizy ve ny manana saka ? Betsaka ny ray aman-dreny misalasala sy mametraka izany fanontaniana izany. Ireto kosa ny antony mahatsara ny fisian’ny saka ao an-trano…
« Ne regrette jamais rien, car il fût un temps ou c’est exactement ce que tu voulais »
Fihetseham-po hafahafa ny nenina. Fihetseham-po manimba saina, mandratra fo ary mety hanimba ny hoavy mihitsy kanefa sarotra fafana.
Hanova anarana : Inona avy ny taratasy ilaina? aiza no haleha?